USharma udale amahlathi angama-33 ngobuchule bakhe obukhethekileyo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Indoda eyakha amahlathi eIndiya inokwenza nakwigadi yakho
Ngokuqinisekileyo abanye benu abasifundayo baya kulazi ibali elibhalwe nguJean Giono elibizwa ngokuba "Indoda etyale imithi" ebalisa ibali likaElzéar Bouffier, umalusi wentelekelelo, nangona ethembekile, othe kwiminyaka emininzi wazinikela ekutyalweni kwemithi kwindawo enkulu yaseProvence kwaye yajika into eyayiyinkqantosi ibe yindawo egcwele ubomi kunye nohlaza. Ibali elimangalisayo elibonisa indlela esinamandla ngayo ukutshintsha okusingqongileyo okusingqongileyo ngokunyamezela okuncinci kunye nomsebenzi olungileyo, ophethwe nguShubhendu Sharma.
USharma Wayeka umsebenzi wakhe wokuba yinjineli ukuze atyale imithi ubomi bakhe bonke. Sebenzisa indlela kaMiyawaki ukukhulisa izityalo kunye nokuguqula nayiphi na indawo ibe lihlathi elizimeleyo kwiminyaka embalwa. Ikwazile ukwenza amahlathi angama-33 kulo lonke elaseIndiya kwiminyaka emibini. Apha sikubonisa indlela ayenze ngayo.
UShubhendu Sharma, injineli yoshishino, uzisa ithuba lokuzisa indalo yehlathi kwigadi yakho. Yonke le nto yaqala xa uSharma Livolontiye ukunceda u-Akira Miyawaki Ukulima ihlathi kumzi-mveliso weToyota apho wayesebenza khona. Inkqubo kaMiyawaki isetyenziselwe ukuvuselela amahlathi ukusuka eThailand ukuya eAmazon, ekhokelela eSharma ukuba icinge ukuba inokwenza okufanayo naseIndiya.
USharma waqala ukuzama imodeli kwaye wenza uguqulelo olukhethekileyo kwilizwe lakhe emva kotshintsho olwahlukileyo kusetyenziswa iipropathi ezithile zomhlaba. Inzame yakhe yokuqala yokudala ihlathi yayikwigadi yakhe e-Uttarakhand, apho wakwazi ukuyenza ngexesha lonyaka. Okwamnika ukuzithemba okwaneleyo ukuba ahambe ngokusisigxina, awushiye umsebenzi wakhe, kwaye achithe uninzi lonyaka ephanda ngendlela yakhe.
USharma wenza i-Afforestt, inkonzo yokubonelela ngamahlathi endalo, asendle kunye nokuzimela ngo-2011. Ngamazwi kaSharma: «Injongo yayikukubuyisa amahlathi endalo. Abaxhomekeki kuphela ngokwabo kodwa Akukho zondlo«. Esinye sezigqibo zakhe ezinkulu yayikukuyeka umsebenzi wakhe njengonjineli onengeniso ephezulu eToyota ukuze atyale imithi ubomi bakhe bonke.
Iziqalo zazinzima, kodwa ngoku iSharma ineqela labantu aba-6. I-odolo yabo yokuqala yayivela kumenzi wefanitshala waseJamani owayefuna kutyalwe imithi eyi-10000. Ukusukela ngoko, i-Afforestt isebenzele abathengi abangama-43 kwaye batyale phantse i-54000 yemithi.
1 Isebenza njani iAfforestt
Isebenza njani iAfforestt
Ihlathi ibonelela ngolawulo olupheleleyo kunye nenkonzo yokwenza equka imathiriyeli, izixhobo, izixhobo kunye nayo yonke into efunekayo kwiprojekthi usebenzisa indlela yeMiyawaki. Inkqubo iqala ngokuvavanya umhlaba kwaye ikhangele into efunekayo ukuyenza elungileyo ukuba iqale ukutyala zonke iintlobo zezityalo kuwo.
Umhlaba Kuya kufuneka ubuncinci ube ngama-93 eemitha zesikwere ukuqala ukufunda zeziphi iintlobo zezityalo kunye nebhayome ezifunekayo. Emva kovavanyo, izityalo zokuqala ezincinci zilungiswa kumhlaba one-biomass ukuyenza ichume nangakumbi.
Gqibela iqala inkqubo yokutyala phakathi kwe-50 ukuya kwi-100 yeentlobo zeentlobo zemveli. Isigaba sokugqibela sigxile ekuchumiseni nasekunkcenkcesheleni indawo kule minyaka mibini izayo, emva kweli xesha, ihlathi alisayi kuphinda lifune ulondolozo kwaye liya kuzinza lilodwa. Uncedo olukhulu lwe-Afforestt yimodeli yexabiso eliphantsi ngamatyholwana amancinci akhula malunga nemitha enye ngonyaka.
Ihlathi idale amahlathi angama-33 kwizixeko ezili-11 eIndiya kwaye ifuna ukwandisa eli nani. ISharma inezicwangciso ezininzi zokukhula nokubeka le teknoloji ukuze abantu abaninzi bayisebenzise.
Ukucwangcisa kuyaqhubeka yazisa isoftware esekwe ekubuyiseni imali ukuze nabani na ube nakho ukongeza iintlobo zezityalo zakho zemveli kwindawo yakho kwisixhobo. Ke xa umntu efuna ukutyala ihlathi lakhe, bayakwazi ukuba loluphi uhlobo oluya kuthatha ukuze luzinze ngokwalo.
Enye yezimvo zakhe kukwenza indawo apho ungakhetha khona iziqhamo kwigadi yakho okanye iyelenqe Kulula ukuyithenga kwintengiso. Inyathelo elinomdla lokudala amahlathi angadingi kulondolozwa kwaye ukuba ufuna ukwenza eyakho ungandwendwela Kwiwebhu okanye nxibelelana noSharma ngokwakhe info@afforestt.com.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Indoda eyakha amahlathi eIndiya inokwenza nakwigadi yakho
Ndiyithandile iposti yakho, inomdla kakhulu. Ngelixa abanye bezinikele ekugawuleni amahlathi apheleleyo, abanye bayadala. Ndiyawuthanda umbono.
Enkosi Beatriz! Ukuba endaweni yokutshabalalisa sidale, sonke singangcono
Enkosi Manuel. Le post yandenza ndancuma. Ndibeka inkwenkwezi xa ndifuna ukubeka u-5 kodwa ayisandivumeli ukuba ndilungise. Enkosi
Akukho nto yenzekayo! Into ebalulekileyo kukuba uyithande iposti: =)
UCarlos Toledo sitsho
umbono olungileyo kakhulu
Ndisebenza kwinkonzo apho sinokwenza khona oku
Phendula uCarlos Toledo
I-Thorum Reactor yokuqala yeHlabathi yowama-2016 yokuNikezela ngeMandla eNyukliya aKhuselekileyo kunye namaxabiso aphantsi
Amandla elanga akhule ngamandla e-Australia